Nosy Cayman: mpitsidika stayover mahery ny antsasaky ny tapitrisa amin'ny taona 2019
Home » Toerana fitsangatsanganana » Nosy Cayman: mpitsidika stayover mahery ny antsasaky ny tapitrisa amin'ny taona 2019
Janoary 23, 2020
The Cayman Islands namarana ny folo taona tamin'ny fahatongavan'ireo rivotra niditra an-tsokosoko, nanasongadinana taona iray hafa fitomboan'ny fitobiana sy habakabaka. Ho an'ny taona kalandrie 2019, ny fahatongavan'ny rivotra dia nahatratra 502,739 izay maneho fiakarana 8.6 isan-jato raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny taona 2018 - na olona 39,738 fanampiny. Ity no fitsidihana farany ambony indrindra amin'ny tantara voarakitra (nihoatra ny Jan-Dec 2018) ary ny fahafolo taona nifarana isan-taona nitomboan'ny fitsidihan'ny stayover.
Amin'ny ankapobeny, ny tsena loharano ambony ho an'ny fahatongavan'ireo stayover dia nanohy ny fitomboany mahavariana niaraka tamin'ny fitomboan'ny isan'ny tonga avy any Etazonia (Mpitsidika 33,293 2018 bebe kokoa noho ny 3,525), Kanada (mpitsidika 2018 mihoatra ny 829), ary United Kingdom (2018 mpitsidika bebe kokoa noho ny XNUMX).
Araka ny antontan'isa nomen'ny Cayman Airways, ny fahatongavan'i Cayman Brac - izay misy ny mpitsidika sy ny mponina - dia fito isan-jato, eo ho eo amin'ny 4,350 2019 eo ho eo ny mpandeha raha oharina amin'ny 2018 ary 62,911 ny mpandeha tamin'ny taona 2019 - rakitsoratra vaovao ho an'ity zotra ity. Ho an'i Little Cayman, nisy ihany koa ny firaketana vaovao momba ny fahatongavan'ireo mpitsidika sy mponina, misy mpandeha 30,537 - ny ankamaroan'ny tonga indrindra.
Ny fitomboan'ny famangiana manan-danja ho an'ireo nosy telo dia mitazona làlambe miakatra mandritra ny dimy taona lasa. Tamin'ny taona 2015, ny mpitsidika dia mpitsidika mpitsangatsangana 385,378, ary tamin'ny 2019 dia nisy 502,739 izay mitovy amin'ny fitomboan'ny 30.5 isan-jato na 117,361 ny vahiny. Sambany teo amin'ny tantaran'i Cayman, telo volana tao anatin'ny taona kalandrie iray no nahitana tampon'isa vahiny 50,000 2019 mahery nitsidika ny morontsirakentsika — Martsa, Jolay, ary Desambra 2019. Amin'ny ankapobeny, afa-tsy ny volana septambra 11, ny firenena dia namaky ny firaketana ny fahatongavana teo aloha nandritra ny 12 volana tamin'ny XNUMX.
Raha nieritreritra ny fiatraikany tsara naterak'io fitomboana io ny fahatongavan'ireo mpitsangatsangana, dia nizara ny Minisitry ny fizahan-tany, Moises Kirkconnell, hoe: "Hatramin'ny nanombohako ny asako tamin'ny naha minisitry ny fizahantany ahy dia fikasan'ny governemanta ny hamoronana fiantraikany tsara manerana ireo nosy telo izay manatsara ny fianakavian'i Caymanian. Fantatsika fa ny fizahantany dia manome fotoana maro — manomboka amin'ny fandraharahana ka hatramin'ny fizaràna ny kolontsaintsika — izay manome hery ny olontsika hivoatra amin'ny lafiny matihanina sy manokana. Io no nifantohanay tato anatin'ny dimy taona ary ho laharam-pahamehana hatrany izahay handroso. "
Manaiky ny asan'ny Departemantan'ny fizahan-tany, Cayman Airways ary ireo mpandray anjara amin'ny fizahan-tany maro, hoy ny Minisitra, "Taona vitsivitsy lasa izay, nanohitra ny departemantan'ny fizahan-tany sy ny mpandray anjara izahay sy ny governemanta mba hahatratra tsena vaovao ary hamorona tombony ho an'ny fitomboana sehatry ny fizahantany. Ireo isa ireo dia miteny ho azy ireo - olona maherin'ny 502,000 no nifidy ny tranonay - trio telo feno fanetren-tena izay azo atolotra betsaka - mba hahatanteraka ny nofinofiny amin'ny fahatongavany any amin'ireo Nosy Cayman. Niakatra tamin'io fanamby io ny Departemantan'ny Fizahan-tany tamin'ny alàlan'ny fomba taktika sy famoronana isan-karazany, ary tokony hirehareha isika rehetra amin'izany vokatra mahavariana izany. ”
Ny sehatry ny fitomboana iray dia ny faritry ny tokantrano misy fananana fizahan-tany fizahantany manana fahazoan-dàlana vaovao. “Fahatsapana zava-bita lehibe ny fahafahan'ny departemantan'ny fizahan-tany manampy ny besinimaro hahatakatra fa ny fizahantany dia mahatafiditra olona rehetra. Manolo-tena hatrany izahay ny handray ny fironana amin'ny diany mialoha ary hanome antoka fa ny Nosy Cayman hijanona eo alohan'ilay fiolahana raha hanome ny mpitsidika ny masoandro nofinofy, fasika sy ranomasina nofinofy tsara tarehy », hoy ny fanamarihana Ramatoa Rosa Harris, Tale, departemantan'ny fizahan-tany ao amin'ny Nosy Cayman .
Ny fitsangatsanganana an-trano kosa dia lafiny iray monja amin'ny raikipohy fahombiazana amin'ny taona 2019. “Ny mpiray antoka aminay dia mahatakatra mantra izay ampiasako matetika rehefa miresaka momba izay mahatonga antsika hahomby: 'Airlift is our oxygen',” hoy Ramatoa Harris. “Ny ekipako sy izaho dia mitrandraka ezaka lehibe hitazonana sy hampitomboana ny fiaraha-miasa matanjaka fiaramanidina mba hiantohana sy hitombo ny fahaizan'ny zotram-piaramanidina sy ny fahita matetika amin'ny sidina mandritra ny taona. Io fahatsorana tsy mitsaha-mitombo io amin'ny fidirana ho an'ny mpitsidika anay, ampiarahina amin'ny serivisy Caymankind miavaka sy traikefa tsy manam-paharoa amin'ny firenentsika, ahafahantsika mampitombo ny orinasa sy mametraka ny firaketana ny fitsidihana. " Ny fanalavirana ny tsena loharanom-pahalalana mpitsidika ho an'ny toerana dia nanitatra fanitarana tamin'ny taona 2019, na tamin'ny alàlan'ny fampitomboana ny serivisy na ireo zotram-piaramanidina vaovao misidina mankany amin'ny firenena.
Ny fanambaràna momba ny seranam-piaramanidina malaza tamin'ny taona 2019 dia nanokatra ny làlana ho an'ny taona mahomby ary nametraka ny dingana ho an'ny fahazoana mitsidika bebe kokoa amin'ny taona 2020. Anisan'izany ireto:
- Niverina tany Denver ny mpitatitra saina nasionaly Cayman Airways tamin'ny Desambra 2019 hatramin'ny Aogositra 2020 niaraka tamin'ny serivisy indroa isan-kerinandro.
- American Airlines dia nanambara ny serivisy fanampiny ara-potoana avy any Boston ary serivisy vaovao avy amin'ny JFK amin'ny 2020.
- Sunwing dia nanambara ny fanombohana ny serivisy any amin'ny Nosy Cayman avy any Toronto, Kanada ny volana febroary 2020.
- Nampiditra sidina fanampiny ny British Airways ny talata.
- United Airlines mamindra ny làlany Newark mankany amin'ny serivisy isan'andro manomboka amin'ny volana desambra 2019 hatramin'ny aprily 2020.
- Southwest nanampy an'i Baltimore ara-potoana, izay nanomboka tamin'ny volana Jona 2019, mitombo isa hatrany amin'ny 2020
- Atsimo andrefana ny serivisin'izy ireo any Houston hanomboka amin'ny volana martsa fa tsy amin'ny faran'ny lohataona amin'ny 2020 ary hivoatra isan'andro hatramin'ny Jona 2020.
- WestJet sy AirCanada nitombo matetika ho an'ny 2020.
Manakoako ny mantra fiaramanidina ataon'ny Tale, ny Hon. Hoy koa ny praiminisitra lefitra: "Isan-taona, ny ekipako sy ny Minisiteran'ny departemantan'ny fizahantany dia miasa tsy an-kijanona mba hanamorana ny fitomboana isan-taona amin'ny fitsidihana amin'ny fomba maro. Na dia ny tombotsoan'ny fomba stratejika aza dia ny hizarantsika ny tanindrazantsika tsara tarehy amin'ireo mpitsidika erak'izao tontolo izao, tsy maintsy tohizantsika hatrany hatrany fa ny fizahantany dia mpamily orinasa matanjaka sy ekonomika. Tompon'andraikitra amin'ny mponina ao amin'ny Nosy Cayman izahay mba hahazoana antoka fa lasibatra amin'ny laser izahay amin'ny famoronana faritra fampandrosoana ara-toekarena amin'ny alàlan'ny sehatry ny dia sy fizahan-tany isan-karazany. Tsy atao tampoka izany; ny fikarohana, ny fanavaozana ary ny fisainana hamoronana paikady miorina amin'ny famoronana tsy misy tahotra dia samy nandray anjara tamin'ity fahombiazana ity. Manampy izany ny fahavononantsika hatrizay hampiditra fandaharam-pianarana fizahan-tany mifantoka amin'ny fizahan-tany any an-tsekolantsika hatramin'ny fahazazany ka hampiofana ireo taranaka ho avy izay afaka sy handray soa amin'ity sehatry ny asa ity amin'ny taona ho avy. "
Matoky izy fa ny fitambaran'ny tetika dia hitarika ny nosy Cayman hanana fitomboana amin'ny fitomboana eo amin'ny lafiny toekarena, ny Departemantan'ny fizahantany dia eo am-piomanana amin'ny drafitra mavitrika amin'ny taona 2020, izay miorina amin'ny drafi-pirenena momba ny fizahantany. "Amin'ny alàlan'ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny indostria mavitrika hiantohana ny fahombiazan'ny fizahan-tany amin'ny ho avy, dia tsy maintsy mikasa ny ho avy hatrany isika," hoy Ramatoa Harris. "Amin'ny maha departemantan'ny governemanta manana tanjona hitarika am-pitandremana ny indostrian'ny fizahan-tany amin'ny avo vaovao, dia hifantoka hatrany amin'ny fanamorana ny tsena loharano, fiaraha-miasa vaovao, ary drafitra marketing vaovao hotohizanana izahay hanohy hitarika ireo fahombiazana ho an'ny Nosy Cayman any ny folo taona vaovao ho avy.
Nanampy sidina 29 ho any Miami ho an'ny Super Bowl LIV ny United Airlines
Wizz Air dia mandefa sidina vaovao avy any Budapest mankany Santander, Espana
54 minitra lasa izay